भोलि धन्तेरसको दिन ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि धन्तेरसको दिन ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल!
भोलि धन्तेरसको दिन ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल!
admin4weeks ago जीवनशैली Leaveacomment 191 Views
भिजाएको काँचो चना नियमित खानुका यति धेरै अचम्मको फाइदाहरु, छक्क पर्नुहुनेछ !
भाउजूले गरिन आफ्नै देवरको हत्या : शव आधाअवस्थामा फेला जलेको
के तपाइको यस्तो बानि छ ? छिट्टै बुढ्यौलीतिर धकेलिनु होला है !
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। सवारी साधनको प्रयोग निकै सावधानपूर्वक गर्नुहोला। यस दिन नयाँ कार्य सुरु नगर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गको लागि दिन मध्यम रहनेछ। स्त्री वर्गबाट हानि हुने सम्भावना रहेको छ।
साहित्य तथा कला क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिको कमी हुनेछ। परिवारमा सुख-शनिमय वातावरण रहनेछ। साथी-भाईसँग यात्राको आयोजान हुने देखिन्छ। आर्थिक आयोजना सफलतापूर्वक पूरा हुनेछ। स्वादिष्ट एवम उतम भोजनको अवसर मिल्नेछ।
परिवारको साथ आनन्दमय रूपले समय बित्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्न विलम्ब होला। आर्थिक क्षेत्रमा केहि अवरोध आउनसक्छ, ध्यान दिनुहोला। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको भरपूर सहयोग प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। मित्रगण तथा आफन्तजनसँग आनन्दमय रूपले समय बित्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता छाउनेछ। यात्राको योग बन्नेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। विपरित लिंगी प्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। मन प्रशन्न रहनेछ।
शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। अनावश्यक वाद-विवादबाट टाढा नै रहनुहोला। आफ्नो वाणी तथा क्रोधमा संयम राख्नुहोला। उग्र व्यवहारको कारण समस्या आउनसक्छ, सतर्क रहनुहोला। मानसिक तनाब बढ्नेछ।
आर्थिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्। पदोन्नतीको योग रहेको छ। स्त्री मित्रबाट विशेष लाभ मिल्ला। यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। वैवाहिक जीवन सुखमय रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ।
हरेक कार्य सरलतापूर्वक पूरा हुनेछ। सामाजिक मान-सम्मान बढ्नेछ। तपाईंको आत्मविश्वास तथा मनोबलमा वृद्धि हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीबाट प्रोत्साहन मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा बिस्तार हुनेछ। आयमा वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ।
शारीरिक थकान तथा मानसिक तनाब बढ्नेछ। सन्तान सम्बन्धि कुराले मन चिन्तित रहला। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तथा सहकर्मीको साथ मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। व्यापार व्यवसायमा चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्।
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। क्रोध तथा वाणीमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त होला। व्यर्थको झै-झगडाबाट टाढा नै रहनुहोला। अत्याधिक खर्च हुनाले आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ। खान-पानमा विशेष ध्यान राख्नुहोला।
व्यापार व्यवसायमा बिस्तार हुनेछ। कार्यभारमा वृद्धि हुनेछ। विपरित लिंगी प्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। सामाजिक मान-सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। प्रिय व्यक्तिसँगको भेटले मन प्रशन्न रहनेछ। यात्राको योग रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण कायम रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको भरपूर सहयोग मिल्नेछ। परिवारका सदस्यको साथ आनन्दमय रूपले समय बित्नेछ। कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्नेछ।
साहित्य तथा लेखन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। प्रियजनसँगको रमणीय भेटले दिन आनन्दमय हुनेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। मानसिक तनाब बढ्नेछ। वाणीमा संयम राख्नुहोला।
Previous १ लाख १७ हजार पर्ने स्कुटर नेपाली बजारमा, किन्ने होइन त
Next घर नजिकै पोलमा अजिङ्गरले चिल निल्दै गरेको भिडियो भाइरल (भिडियोसहित)
काठमाडौँ , ज्योतिषशास्त्र अनुसार बूढी औंला सुन्दर हुने व्यक्ति बुद्धिमान र चतुर हुन्छन् । यिनीहरू …